Semalt: Inona no atao hoe Spam email? Nahoana ny Governemanta no mikarakara izany?
Miely sy mampidi-doza ho anao ny spam email. Igor Gamanenko, manam-pahaizana Semalt , dia manazava fa mitranga izany rehefa manaparitaka fitaovana maloto amin'ny aterineto ny spammers, ary ny tanjon'izy ireo dia ny adiresy mailakao. Na dia mbola mitatitra aza ny maro amin'ireo sendikà hafahafa amin'ny Gmail, Yahoo, ary Rediff ianao, dia tsy afaka miala amin'ny sariitatra an-tserasera ianao raha toa ka mampiasa teknika samihafa ny mpikirakira hackers
Araka ny famaritana, ny mailaka mailaka dia rehefa misy mailaka mifanaraka amin'ireto fepetra manaraka ireto:
Fitateram-bahoaka: Mailaka alefa amin'ny olona marobe.
Anonim-pahamarinana: Izany dia mitranga rehefa asiana tombo-kase ny maha-identity sy ny adiresin'ny mpanolotra, ary tsy azonao atao ny manamarina ny toerana nanirahany anao ny hafatra.
Tsy ara-dalàna: Tsy mahazo mandefa mailaka ny olona iray; Na izany aza, dia mandray ny hafatra tsy misy dikany izy isan'andro..
Nahoana ny governemanta no miahy ny mailaky ny mailaka?
Ny governemanta federaly amerikana sy ny Komity Federaly (FTC) dia naneho ny ahiahiny momba ny spam mailaka ary nanangana kajikajin'ny federaly Can-Spam tamin'ny taona 2003. Araka io hetsika io dia afaka mandefa ny mailaka voasoratra ny mpampiasa, ary ny FTC dia hijery matetika ireo adiresy mailaka. Ny andraikitry ny FTC dia ny hiaro ny mpanjifa sy ny mpiserasera amin'ny fomba tsara kokoa.
Alao ny sainao fa mety hampidi-doza anao amin'ny fomba maro ny mailaka spam. Ny sasany amin'izy ireo dia nodinihina etsy ambany:
Vahaolana ara-bola sy ara-tsosialy: Satria ny e-mailaky ny spam dia nohavaozina sy novolavolaina mba hangatahana ny fampahalalana ara-bola sy ny angon-drakitra toy ny PayPal ID, ny carte de crédit, ary ny angona manokana toy ny fiantohana sosialy avy amin'ireo mpisera, avy eo dia ampiasaina amin'ny angom-baovao sy ny karazana heloka an-tserasera izany. Ny hetsika Can-Spam dia tsy manakana ny mailaka tsy ho tonga any amin'ny mailaka fa hametra ny isan'ny spammers amin'ny fanakanana ny adiresy IP mandritra ny androm-piainany.
Fiarovana ny ankizy: Ny hetsika kanosa-spam dia novolavolaina mba hanafoanana alim-bavaka tsy maody maro izay mamoaka adiresy tsy mendrika sy tsy misy ilana azy ho an'ny zanatsika. Tsy misy fomba manokana hanakanana ny zanatsika tsy hizara ny adiresy mailaka, fa afaka manasongadina ny isan'ireo sendikaly miantoka ny fiarovana azy amin'ny aterineto.
Nahoana no mandefa mailaka amin'ny mailaka ny spam?
Ny vintana dia ny te-hamaky ny adiresinao mailaka, te-hiditra amin'ny ordinateranao, te-hahazo tombony ara-bola amin'ny fampiasanao ny antsipiriany, ary te hampahatezitra ny namanao sy ny fianakavianao amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsokosoko azy ireo. Ankoatra izany, ny sasany amin'izy ireo dia mandefa mailaka amin'ny spam mba hamoahana ny vokatra avy aminy ary manandrana mametraka ny mpampiasa amin'ny sary sy horonan-tsary manintona. Amin'ny lafiny iray na amin'ny iray hafa dia mampidi-doza ny mailaky ny spam, ary tokony hamorona sivana ianao amin'ny alàlan'ny ID sy ny sendikà mampiahiahy, miaro ny fiarovana anao sy ny fiarovana amin'ny Internet. Raha tratran'ny mpitsoka ianao dia mety hamoy vola betsaka ary mety hahita ny fandravanao ny orinasa noho ny hetsika tsy mampiahiahy sy tsy ara-dalàna. Tsy tokony handefa ireo gazetiboky hafahafa ianao ary tsy hividy zavatra amin'ny magazay tsy azo itokisana Source .